Omaly zoma maraina 08 janoary 2021, nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina teny Mahazo, manakaiky ny fiangonana Advantista iny. 11 janvier 2021
Marihina fa efa tsy nahatsiaro tena intsony izy tamin’izany, hoy ireo nahita maso ny tranga. Avy hatrany dia nifamonjena haingana noentina tany amin’ny Hopitaly Soavinandriana ity farany saingy tsy tana intsony ny ainy, raha ny fanazavana ihany.
Misesilany ny lozam-piarakodia, indrindra ho an’ireo mpitondra ny kodiaran-droa ka tokony ho mailo ny rehetra. Mila fitandremana betsaka avy amin’ny tsirairay ny fisorohana ny loza fa lahitokana ny aina.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2005) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (909) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (205) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (110) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (105) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (93) 2 mars 2021